Rastrabani.com | प्रचण्डलाई ओलीको धम्की: तिम्रा प्यादाले फेसबुकमा के लेखेका हुन् ? - Rastrabani.com प्रचण्डलाई ओलीको धम्की: तिम्रा प्यादाले फेसबुकमा के लेखेका हुन् ? - Rastrabani.com
प्रचण्डलाई ओलीको धम्की: तिम्रा प्यादाले फेसबुकमा के लेखेका हुन् ?
काठमाडौं, २० माघ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकीय सचिव मनहरी तिमिल्सिनाले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेको स्टाटसबारे एमालेमा चर्चाको विषय बनेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै यो विषयमा चाँसो देखाएका छन् ।
नयाँ सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढने सन्देश दिने उद्देश्यका साथ भएको भारतीय विदेश मन्त्री स्वराजको भ्रमण उपयुक्त समयमा नभएको कुटनीतिक वृतमा पनि चर्चा हुने गरेको छ । -संचारकेन्द्र डट कमबाट साभार